MAQAAL:-Maxamed Ibraahim Shakuul IYO Yaasiin Garaad. Aan garteena kala goosanee gogol inoo xaar! Qeybtii 3aad. | News From Somalia
DOOD:- Wax badan kama dhahayno, Qormooyinka Maxamed Ibraahim Shakuul iyo Yaasiin Abdi Jaamac (Yaasiin Garaad), horta Shakuul God ayuu ku jiraa Asaga iyo Wadaaddadii Saaxiibadiis ahaa, Ma islahayd Wadaaddo gaalo raacay ayaa wali Shacabka Soomaaliyeed weydiinaya Alwalaa Walbaraa?, Qormada ka Akhri Jawaabta Yaasiin Garaad siiyey Shakuul, wuxuu yiri Yaasiin Garaad “Shakuulow aad i weydiiso Alwalaa Walbaraa ee Adigu Walahaagii ma Itoobiya iyo Kenya ayaad siisay?”.
Shakuul Shareecada Islaamka been ayuu ka sheegay, goormay Erayadaan iskumid noqdeen, haddii Shareecada Islaamka iyo Luuqadda Carabiga laga hadlayo, gaar ahaan Shareecada Islaamka?,
Insha Allah, waan ka hadli doonaa Erayadaas, Maadaama Qoraagu uusan ka hadlin, lagana yaabo in ay ka hoos baxday ama uusan Muhiimad gooniya uusan siinin, balse sida Shakuul qiray, waa Nin Shareecada Islaamka been u Xanbaarinaya halka uu Bush uu ka difaacayo sida uu sheegay oo uu yiri, “Bush ma keenin Erayadaan”.
FG: Jawaabta Maxamed Ibraahim Shakuul hoos ka Akhri, kadibna Hoos Ka Sii Akhri Jawaabta Yaasiin Garaad Ka Bixiyey.
Hordhac iyo Araar. (Qaybtii 2aad)
Mahad Alle ka dib, Waxaan u mahadcelinyaa akhuunaa Yaasiin Garaad, qoraalkiisa 2aad. Inkastoo aanan walaalkay anigu si rasmi ah uga dalban ama ku kallifin inuu is cadeeyo, oo aan tilmaamay inay fiicnaan lahayd oo kaliya in uu waxyaabaha qaarkood cadeeyo, hadana waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa is xilqaankiisa sida uu caddeeyey arrimaha qaarkood. Waxaase xusid in arrimaha qaarkood aan sidaas lagaga gudbi Karin loona baahan yahay in la saxo. Qodobada aan is leeyahay qabasho “Mu’aakhadaat” ayey mudan yihiin waxaa ka mid ah:
Yuu u hadlaa ama matalaa Qoraagu?
Hadalada yaabka leh aadna uga fog xaqiiqda ee uu walaalkey tilmaamay waxaa ka mid ah inuu sheegtay inuu matalo dad gaar ah waxaa ka mid ahaa erayadiisa “Waxaa jirta cid aan matalo oo af-keeda ku hadlo”. Ka dibna wuxuu xusay afraad iyo kooxo kala duwan oo u sheegtay inuu matalo. Sheegashadaasi ma aha mid sax ah mana matalo kooxahaas iyo afraadaas taariikhda leh toona, mana jirto meel lagu doortay ama loogu idmaday inuu afkooda ku hadlo, bal waxaa dhici karta inay dadkaas uu tilmaamay qaarkood u arkaan nin iyaga cadow ah iyaga kana bari noqon lahaayeen.
Waxaan dhab ah in waxa kaliya ee uu qoraagu oo turjumi karaa ay tahay aragtidiisa shakhsiga ah ee ku wajahan waaqicaas, sida qof kasta oo muwaadin ah uga hadli karo aragtidiisa ama taageradiisa ku wajahan masiirka ummada, sidaas awgeed waa sheegasho aan waxba ka jirin. Qofkuna inuu shaati aad uga wayn xirto ma habboona.
Akhristow Sheegashada noocan oo kale ah ee qofku sheegto wax uusan lahayn sida inuu sheegto mansab, tamthiil (matalid), dhul, dhaqaale iwm waxay ka mid tahay waxyaabaha keenay burburka iyo khilaafka ummada Soomaaliyeed illaa maanta haysta, waxaynu marwalba aragnaa rag sheeganaya inay matalaan beel ama afhayeen u yahay koox taasoo aanay waxba ka jirin sidaa awgeed waxaa fiican inuu walaalkay ka waantoobi arrinkaas.
Anigu shakhsi ahaan kuma hadlayo afka culimda, kan ganacsatada, kan aqoonyahanada, kan qabiilka iyo mid xarako toona, majirto cid aan matalayo oo aan ka ahayn aragtidayda shakhsiga ah, taas micnaheeda ma aha inaysan jirin cid aan taageersanahay ama aan ka tirsanahay ama la dhacsanahay fakarkooda.
2. Yaasiin Diinta Ma wadanka ayaa uga muhiimsan?
Hadaba Waxaa nasiib darro in uu qoraagu walahiisa siiyey dad ay cadahay inay gaalnimo cad ku dhaceen iyo kuwa la taagan inay wadaniyad u dagaalamayaan, Wuxuuna sheegtay inuu safkooda ku jiro, taasina waxay daaha ka fayday in qoraaga wadaniyadu uga wayn tahay diinta.
3. Aragtidi qoraaga ee ku wajahan Xarakaadka.
Waxaa uu walaalkey sheegay inuu khalad iyo ceeb u arko jiritaanka xarakaadka wuxuuna yiri; “anigu waxaan u aqaan ceeb iyo cunsuriyad iyo waliba dib u socodnimo lagula dhex meeraysto dadka Muslimiintaa dhexdooda. Xarako waxay kobcisaa oo xoojisaa nacayb la nebcaado qof Muslim ah ayada oo aysan jirin sabab aan ka ahayn xarakadayda maahan iyo in dadka laga dhaadhiciyo xarakayda kaliya ayaa xaq ah oo Janada Illaahay galeysa” aragtidaas waa gef aad u wayn oo u geystay dhamaan xarakaadka Islaamiga ah oo dhan, mana aha sidaas aragtida shareecadu ka qabto xarakaadka. Waxaynu ognahay in xarakaadka islaamiga qaar badan oo ka mid ah ay u taagan yihiin kor u qaadida kalmada Ilaahay oo ay u khidmeeyaan dacwada iyo diinta, in hadaba uu la isku wada qabto waa cadaalad daro iyo xadgudub. Waxa shareecdau diiday waa tacasubka indho la’aanta ah oo ah xaqa oo laga hormariyo xarakada. Waxay Xarakaadka islaamka qaarkood qayb wayn kaqaateen faafinta dacwada, difaaca dalka, diinta iyo dadka.
4. Iska hor imaad (tanaaqud) yaab leh.
Waxaa iyana ah iska hor imaad yaab leh noqday in Yaasiin marna uu sheegto in kooxaha qaarkood uu matalo, marna uu ceeb u dib u socodnimo u arko jiritaankoodaba. Sow hadaba caddaalad darro ma aha in marna lagu faano juhuudda & makaasibta xarakaadka iyo kooxaha kala duwana soo hooyeen, hadana lagu tilmaamo “ceeb cunsiriyad, dib u socodnimo dadka lagula dhex meereysto” waa sida uu hadalka u dhigay, sow hadaba arrinku noqon maayo “kuwa jecel in looga mahad noqo waxaysan samayn” mise “Kuwa hadduu xaqu dhinacoodu soo maro u hogaansama” haddii kalese ka bari noqda.?
5. Xag jirnimda waa maxay?
Kalmada Xagjirnimo ama Quluwi, khawaarij iyo Takfiir iwm waa kalamado muujinya xadgudub dheeraad oo lagu sameynayo diinta, waxayna waafaqsan tahay alfaada ama kalmadaha shareecada tilmaantay, mana ah wax Bush iwm ay keeneen, loogana leexan maayo dhihidda kalmadahaas shareecadu ogalaatay gaal sheegay dartiis.
Sida la ogyahay shareecadu waa reebtay oo ceebaysay xigjirnimada, waxaanan rumaysanahay inay ka mid tahay jirrooyinka ugu waaweyn ee ay la silcayaan Muslimiinta caalamka meel walba oo ay joogaan, ummada soomaaliyeedna saamigeeda way ka heshay jiradaas, sidaas awgeed In laga hadlo dadkana looga digo Xagjirnimada waxaan u arkaa inay waajib tahay waana wax Allaah loogu dhawaado. Hadaba xagjir nimadu ma aha wax lagu faano ee wax Ilaahay laga magan galo. Diinteena ma aha mid dhinacna jirta ama u badan ee waa diin toosan oo dhexdhexaad “Wasad” ah.
6. Arrimo aan u arko marin habaabin:
Waxaa qoraagu tilmaamay in aan iri dadka iga soo horjeeda waa Sufaha ama jaahil, warkaas ma aha run, waxaan anigu maangaab, sufaha, jaahil u aqaanaa ama aan ku tilmaamay dadka banaystay cirdiga, maalka iyo dhiiga muslimiinta ah ee ka soo horjeeda iyag, ee ma aha qofkii aniga aragtidayda khilaafa. Arrinkaas waa marin habaabin, waxaana daliil kuugu filan inaan qoraalkayga ku cadeeyey in adiga oo iga soo horjeeda aanan hadana rumaysnayn inaad kuwaas ka mid tahay.
Waxaa xusid mudan inaan rumaysnahay inay wali ii muuqata in DHICI KARTO in marka la fiiriyo siyaaqa hadalka qoraaga u socdo, laga dareemayo in qoraagu ka mid yahay dadka u olooleeya fikirka xag jirka ee ay qaabaan kooxaha qaarkood, arrinkaasna wali kama qancin, waxaanan ururinyaa xaqaa’iq arrintaas ku saabsan oo aan hordhaceedii helay.
Waxaa uu qoraagu yiri: Maxaa adiga kaa dhigay lama canaantaan? Anigu runtii ma ahi lama canaantaan, horeyna waan u tilmaayay inaan khaldami karo, naseexadana waan oggolahay, dariiqeedana waan aqaanaa, laakiin inaan khaldanahy sow inaan garwaaqsado ama la igu cadeeyo ma aha? Mise xukunkiiba waad ridday saaxiib?. Sow madhici karto in adiga uu fahamku kugu qalloocday oo aad khaldantahay? Yaase mudan oo xaq u leh inuu dadka saxo? Waxaa kale oon aad ula yaabanahay waxa qoraaga “Yaasiin Garaad” shakhsi ahaan uu isugu qanciyey inuu isagu yahay midka mudan inuu dadka canaanato oo uu saxo, muxuuse ku mutay martabadaas isla markaana uu noqday midka isaga xaqa ku taagan ee dadka saxa oo kala hora sidii xoolihii? Arrinkaasi sow isku kadsoomi ama quruur noqon maayo?.
Midda ku saabsan hebel baa Ethiopia ammaanay oo sidaas baa ku dhacday hadalkii dheeraa, waa hadal aan sax ahayn, runtii ma aha sawirkaas mid sax ah, waxaanan rumaysan inaan qoraaga uga xog ogaalsanahay waaqica geeska Afrika ka jira maanta.
Anigu waxay ila tahay in uu farqi wayn u dhexeeyo dagaaladii hore iyo waxa maanta dhacaya. Si kastaba ha ahaatee waxaan jeclahay in aan arrimaha la xiriira Ethiopia, Kenya, Somalia iyo waxa hada dhacaya waxaan ka qabo kaga hadlo qoraaladayda dambe insha Allaah.
Ugu dambeystii, walaal si aan doodda u gudo galno waxaa ila quman in aan isla qaadano 3 qodob:
In uusan midkeena matalaynin cid gooni ah kuna hadlaynin afka urur ama koox gaar ah.
In masiirka ummada ka hadalkeeda loo simanahay.
In waxa aan cabirayno ay tahay aragtideena shakhsiga ah oo kaliya.
Intaas hadaan isla qaadano waxaan rumaysnahay in aynu is fahmi karno, dood wanaag caafimaad qabtana aynu sii wadan karno insha Allaah.
Sh. Maxamed Ibraahim Shakuul:
Jawaabta Yaasiin Hoos Ka Akhri|
SH. Shakuul hadaladunu waxay u hadlayaan qaab wadar ah (Jamac ah) waayo maad oran aniguwaxaan leeyahay ee waxaad leedahay anagu waxaanu leenahay?
Sheekooyinka noocan oo kale ah waxay mar marka qoorkood sawir ka bixinayaan sida dadka ehlu diinkaa ay umada ugu cayaari karaan markay ayagu qaribmaan. Waxaan arintan uga jeedaaQoraalkaygii hore waxaan ku soo sheegey inta dad Soomaali ah oo Ethiopia soo raacay ama taageeray lagu gaaleysiiyey ama lagu takooray.SH. Shakuul ma waxaad naleedahay Ethiopia markaan anigu wato waa xaq oo lagama hadli karo marka jamhadaha iyo dagaal oogayaashu soo kaxaystaana waa gaalnimo iyo munaafaqnimo? Waxaan qoraalkaygii hore ku sheegey walaalkay Shakuul oo hortayda kayiri Muslim Muslim gaal uguma tago, maantana isla asagii ayaa anta waxaan ku hadla waliba difaacaya inuu umahad celiyo in Ethiopia iyo Kenya Soomaali qabsadaan.Tanoo kale waa meesha Soomaalidu ka tiraahdo “lajiifiyaana banana, la joojiyaana banana”
Marka ma xuma oo waad iga xog ogaalsanaan kartaa ee bal ii sheeg sirta iyo khibradaha qarsoon ee aad adigu haysid ee ku saabsan taariikhda Africa iyo cadaynta cusub ee aad u haysid in Ethiopia aysan ahayn Ethiopiadii hore? Mida kale hadalkanu soo maahan hadaladii ay dagaal oogayaashu oran jireen in Ethiopia da hada jirtaa ka duwantahay Ethiopia dii hore? miyaan wadaadada iyo culimadu oran jirin waa beentood oo Ethiopia waa Ethiopia dii hore iyo mid ka xun? mise idinkuna maanta ayaad aqbasheen in ay tahay Ethiopia cusub? Soomaalidii hore waxay ku ducaysan jireen [Illaahow dhulka korkiisa hanagu fadeexayn, hoostiisana hanagu cadaabin]waxay kaloo oran jireen [Illaahoow maya iyo haa isku meel hanooga yeersiin]
XIGASHO: Shabakadda SomaliTalk.com FG: Qoraalka hore ee Shakuul ka hadlaya, Golaha Baraarugga Islaamka ayaa iska leh, Shabakadda SomaliTalk shuqul kuma lahan.
VIDEO:-Fadeexadii shakuul Waxay hordhac u tahay Fashilka wadaad xumayaasha!.
This entry was posted in ALAA SHEEKH AND SOMALI WARLORD, Amisom, Ashahaado la dirir!, Axmed Madoobe-Raaskabooni, Banaadir Post, CulumoSuu, Ictisaam, Igad, Islihi-Nairobi, ITOOBIYA, Jubada Hoose, Kenya-Somalia, Kibaki-Kenya, Kismaayo, MAHIGA-UNPOS SOMALIA, Maleeshiyo Beeleed, Males Zenawi, MAQAAL, Neo-colonialism, NO NGO FOR SOMALIA, QURBAJOOG-DANYUUSBARO, Qurbajoogta Somalida, Somali Media, Somalia, Turki & Itoobiya, Turkiga=NATO, Umul iyo Ictisaam, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya, Xasuuqa Maleeshiyo Beeleedka and tagged Alshabaab, Amisom, Banaadir Post, Itoobiya, Kenya, Kenya-Somalia, Kismaayo, MAHIGA-UNPOS SOMALIA, Maleeshiyo Beeleed, Males Zenawi, Moqdisho, News From Somalia, Somalia. Bookmark the permalink.